हामी कार्यालय तथा घर बाहिर साथी भाइसँग भेटघाट गर्दा हात मिलाएर ‘ह्याण्डसेक’ गर्छौ । ‘ह्याण्डसेक’ हाम्रो मौलिक अभिवादन संस्कार भने होइन । ‘ह्याण्डसेक’ पश्चिमा संस्कृतिको सिको हो । तर पनि, यसले जब्बर संस्कृतिकै रूप लिइसकेको छ। यो संस्कृतिको उद्गमस्थल पश्चिमा मुलुकहरूमा त्यो हदसम्म हात मिलाइँदैन, जसरी ‘नमस्कार’ का सन्तति हामी ‘ह्याण्डसेक’ मा अभ्यस्त भइरहेका छौँ । ‘नमस्कार’ जति श्रुतिमधुर छ, यसले प्रवाह गर्ने सन्देश झ्नै संस्कारयुक्त छ। नमस्कार अथवा… पुरा पढौ
तातोपानीले नुहाउँदै हुनुहुन्छ ? (यस्ता समस्या हुन सक्छ)
हिउँद सुरु भएसँगै जाडो बढ्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । जाडो बढेपछि तातोपानीको प्रयोग पनि बढ्दै जान्छ । विशेषगरी जाडोयाममा तातो पानीमा नुहाउने चलन छ । जाडो मौसममा तातोपानीमा नुहाउँदा आनन्द महसुस त हुन्छ । तर के जाडो मौसममा तातोपानीले नुहाउँदा शरीरलाई फाइदा पुग्छ त ? डाक्टरहरुका अनुसार जाडोमा तातोपानीले नुहाउँदा धेरै बेफाइदाहरु हुन सक्छन् । ती के के हुन् त ? सुख्खापन तातोपानीले छालामा सुख्खापन पैदा गराउँछ । छालामा भएको… पुरा पढौ
सासु-बुहारीको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने ? (बुहारीलाई ५ टिप्स)
नेपाली समाजमा विवाहलाई दुई जनाबीचमा मात्र नभई दुई परिवारको मिलन भन्ने गरिन्छ । यस्तोमा पत्नीसामू पतिको घरपरिवारको साथ सामन्जस्यपूर्ण व्यवाहार गर्नुले सम्बन्धमा एकदमै ठूलो प्रभाव पार्छ । उसो त पतिले पनि पत्नीको घरपरिवारका सदस्यहरुलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ तर कहिले काँही जाने भएकोले त्यस विषयमा खासै कुराहरु उठेका पाइँदैन । तर पतिको घरमा पत्नीले पूरै जीवन बिताउने भएकोले महिलाहरुले सम्बन्धको मामलामा अलिक धेरै ख्याल गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ । बिवाहपछि… पुरा पढौ
विश्वका १० सबैभन्दा सुन्दर महिला : को कहाँ छन् ?
विश्वका सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरुको सूचीमा हान्डे एर्सेल रहेकी छन्। सन् २०१९ को सो सूचीमा आत्मविश्वास, बुद्धिमान, लोकप्रियता, आकर्षक र सफल महिलालाई समावेश गरिएको छ। विश्वका १० सुन्दर महिलाहरु यसप्रकार छन् – १. हान्डे एर्सेल२५ वर्षीया टर्कीकी अभिनेत्री तथा मोडल २०१९ को सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन्। टीसी ह्यान्डलरको सूचीअनुसार उनले सन् २०१३ सक्रिय रहेकी यी महिला पहिलो स्थानमा परेकी हुन्। उनी टर्कीकी सबैभन्दा प्रतिभाशाली महिलामध्येकी एक हुन् । २. लिजा सोबेरानोफिलिपिनो–अमेरिकी अभिनेत्री तथा मोडल… पुरा पढौ
विश्वको सबैभन्दा चिसो शहर कुन हो ?
विश्वमा केही स्थानहरु तातो र केही स्थानहरु चिसो छन् । धेरै स्थानमा मौसमअनुसार कहिले तातो र कहिले चिसो हुने गर्छ । विश्वको सबैभन्दा चिसो सहरका रुपमा परिचित यो शहरको नाम हो नोरिल्स्क । यो शहरमा वर्षको ३ सय ६५ दिनमा २ सय ७० दिन हिँउ जम्ने गर्छ । रुसको राजधानी सहर मस्कोबाट यो शहर करिब २ हजार ९ सय किलोमिटरको दूरीमा छ । यो शहरमा केवल विमान वा डुङ्गाको प्रयोग गरेर… पुरा पढौ
विवाहित महिलाले वर्षमा ६ पटक अपरिचित पुरुषसंग सम्बन्ध राख्नैपर्ने !
इन्डोनेशियाको जावामा सोलो नामको एक गाँउ रहेको छ। यहाँ एक पहाड छ जसको नाम केमुकस पर्वत हो। यो 'सेक्स माउन्टेन' को नामले बदनाम छ। यहाँ विवाहित महिला अज्ञात पुरुषहरुसँग संसर्ग गर्छन्। अचम्मको कुरा त यो छ कि सो बिषयमा कसैलाई समस्या छैन। केमुकस पर्वतमा पोर्न फेस्टिवल मनाइने गर्छ। सो क्रममा पेङ्गेरन समोद्रो र नायी ओङ्त्रोवुलानको सम्झनामा फूल चढाइन्छ र कुण्डमा नुहाउने गरिन्छ। त्यसपछि चिनजान नभएका महिला र पुरुष शारीरिक सम्बन्ध बनाउछन्। यदि महिलाले… पुरा पढौ
व्यवहारसम्बन्धी स्नायी वैज्ञानिक गिना रिप्पनको जिन्दगीमा सन् १९८६ को जुन ११ सबैभन्दा खुसीको दिन थियो । त्यस दिन उनले आफ्नो छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । र सोही दिन चर्चित फुटबलर गैरी लिनेकरले पुरुष फुटबल विश्वकपमा ह्याट्रिक गरेका थिए । त्यो रात रिप्पनलाई भर्ना गरिएको वार्डमा ९ वच्चाको जन्म भएको थियो । रुदैं गरेका साना नानी एक एक गरेर तिनका आमालाई दिइदैं थियो । उनको बच्ची दिदाँ नर्सले भनेको कुरा रिप्पनलाई… पुरा पढौ
विवाहमा केटाकेटीको नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न यहाँका पण्डित सहमत भएका छन् । जिल्लामा बालविवाह गर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा पण्डितहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विवाह गराइदिनुअघि जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र विवाहको काम गर्न पण्डितहरू सहमत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘वरबधुको जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाण हेरर मात्र वैवाहिक कार्यक्रम अघि बढाइने निर्णय भएको… पुरा पढौ